August 2018 - Page 2 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 26, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sakiya Xuseen ayaa loo xiray darajada Sareeye Guuto, iyada oo noqoneysa haweenaydii kowaad oo darajadaas ka gaarta taariikhda ciidamada Soomaaliyeed. Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa darajada u xiray haweenaydaas maanta […]
August 25, 2018 Puntland Mirror 0
Baydhabo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Deynuunay ee gobolka Bay maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Weerarka ayaa yimid kadib markii […]
August 24, 2018 Puntland Mirror 1
Labada musharax ee hadda u tartamaya duqa degmada Garoowe waa Axmed Siciid Muuse iyo Axmed Abshir Jaamac. Xulista xildhibaanada golaha deegaanka oo socotay afartii bilood ee lasoo dhaafay ayaa soo dhammaatay, sida masuuliyiin katirsan dowladda […]
August 24, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay taliyaha sirdoonka, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Cabdiqafaar Yaasiin Yacquub, oo ah nin aan horey u soo qaban xafiis dowladeed, ayaa loo magacaabay taliyaha […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Abdiweli Mohamed Ali appointed new chief for intelligence, security sources said. Abdiqafar Yasin Yakub, neophyte, has been appointed as the new chief of the Puntland Intelligence and Security Agency (PISA), security […]
August 23, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda ayaa ansixiyay xeerka macdanta iyo shidaalka kadib kulankooda asbuuclaha oo maanta oo Khamiis ah ay ku yeesheen magaalada Garoowe, ee caasimada. “Xeerka macdanta iyo shidaalka ayaa qeexaya iswaafajinta maalgashiga iyo shuruucda […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha booliiska magaalada Garoowe Maxamuud Muuse Bile oo si guud loogu yaqaan Fardafuul ayaa ku dhaawacmay is-rasaasayn ka dhacday Garoowe Arbacadii, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka. Is-rasaasaynta ayaa ka dhacday guri […]
Garowe-(Puntland Mirror) Garowe police chief Mohamoud Muse Bile popularly known as “Fardafuul” has been wounded in a shooting in Garowe city on Wednesday, security sources said. The shooting occurred in a residential home in Garowe […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay arday ciidamada Somaliland ay ku dileen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Isniintii lasoo dhaafay. “Dawladda Puntland waxay ka xun tahay Ardeydii 20-kii August ay ciidamo […]